Tag: valisoa ho an'ny mpanjifa | Martech Zone
Tag: valisoa ho an'ny mpanjifa
Rehefa niasa tao amin'ny gazety aho dia nahatsapa foana fa nanao zavatra mihemotra izahay. Nanolotra herinandro malalaka maimaim-poana tamin'ny gazety izahay ho an'ireo mpanjifa vaovao. Nanana mpamandrika izay nandoa ny vidiny feno nandritra ny roapolo plus taona izahay ary tsy nahazo fihenam-bidy na hafatra fisaorana mihitsy aza… fa hanome olona tsy misy fahatokisana ny marika misy valiny avy hatrany izahay Tsy nisy dikany izany. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny aingam-panahy
Alakamisy Febroary 23, 2012 Alatsinainy Martsa 5, 2012 Douglas Karr
Tianay ny swag. Ny masoivohon'ny varotra anatiny dia nandidy ny swag voalohany tamin'ny taon-dasa - kahie kely tsara ho an'ny mpanatrika ny fihaonambe. Tamin'ity taona ity dia nividy kapila USB 2Gb mangatsiaka izay mitovy endrika sy habe amin'ny lakile iray ianao hahafahanao mametraka azy ireo amin'ny rojo vy fanalahidy. Raha nijanona teo amin'ny biraonay ianao dia mety nahazo iray! Inona no atao hoe swag? Fandrobana, fandrobana, fandrobana, fandrobana… ny harena azonao avy amin'ny orinasa ho takalony